कोरोना संक्रमण समूह–समूहमा - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home भर्खरै कोरोना संक्रमण समूह–समूहमा
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण समुदायबाट समूह समूहमा फैलिन थालेको छ । पछिल्ला केही दिनयता संक्रमण समूह समूहमा देखिँदै गएपछि यसको जोखिम पनि सोही रूपमा बढ्न थालेको हो ।
– एकै दिन पाँचको मृत्यु
– स्थिति अनियन्त्रित हुन सक्ने
– सिंहदरबार पनि छि-यो कोरोना
काठमाडौंभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा कार्यरत ७२ जना र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा कार्यरत १६ जनामा संक्रमण देखिएको छ । यस्तै, सिंहदरबारको ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिएका दुई सुरक्षाकर्मीमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. पुनले आत्मानुशासन नै कोरोनाबाट बच्ने उत्तम विकल्प रहेको बताए । उनले लकडाउन कोरोना नियन्त्रणको अन्तिम विकल्प नभएको भन्दै स्वयं व्यक्ति सजग रहनुपर्ने बताए ।
यसैबीच सरकारले लकडाउन हटाए पनि सीमानाका कडाइ गर्न नसकेको र हेलचेक््रयाइँ गरे स्थिति अनियन्त्रित हुन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
यसैबीच सरकारले लकडाउन हटाए पनि सीमानाका कडाइ गर्न सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ६ हजार नागरिक भित्रिए पनि उनीहरूको आरटी–पिसिआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छैन । नागरिकले मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग, दुरी कायम लगायतमा हेलचेक््याइँ गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा थप पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । पर्सा र मोरङमा दुई–दुई जना र काठमाडौंमा एक जनाको मृत्यु भएको हो । योसँगै ६३ संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
यसैबीच, पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ३ सय ८१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार संक्रमितको संख्या २१ हजार ३ सय ९० जना पुगेको छ ।
यस्तै, बुधबार १ सय ३० जना उपचारपछि निको भएका छन् । नेपालमा हालसम्म १५ हजार १ सय ५६ जना उपचारपछि निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । संक्रमण फैलिएसँगै सरकारले १४ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । मुख्यतः दीर्घ रोगीहरू, बालबालिका, विभिन्न रोगले प्रताडित भएकाहरू कोरोनाको जोखिममा रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
नक्शा पारितपछि कूटनीतिक पहल तीव्र बनाऊ : काँग्रेस
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले नयाँ अद्यावधिक नक्शा संविधानको अनुसूची–३ मा समाविष्ट भएपछि कालापानी क्षेत्रमा नेपालको निर्बाध हक स्थापित गर्नका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न...
सडकका बेसहारामा पनि कोरोना संक्रमण
प्रदेश ३ नारायण ढुङ्गाना/रासस - August 29, 2020 0
काठमाडौँ । काठमाडौँको कालीमाटीस्थित सडकपेटीमा महिला आफ्नो सानो बालकसँगै थिइन् । कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमका कारण उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएकाले बजार, पसल बन्द थियो ।...
अर्थ रासस - July 11, 2020 0
अर्थ सिबी अधिकारी/रासस - September 8, 2020 0